Tena manandrana manatsara ny tranonkala ve i Google? | Martech Zone
Sabotsy 14 Novambra 2009 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Fotoana vitsy lasa izay, Google dia nametraka patanty amin'ny famakafakana ny fisoratana anarana amin'ny sehatra ho ampahany amin'ny fahefan'ny tranonkala iray. Ny valiny dia ny tontolon'ny bilaogy manontolo sy ny indostrian'ny SEO dia nanomboka nanoro hevitra ny mpanjifa mba hisoratra anarana ny fonenany mandritra ny fotoana be indrindra. aho nanoratra momba izany aza tato ho ato .. ary nolavin'ny namana PJ Hinton avy any Compendium Blogware (jereo ny hevitra).
Ankehitriny Google dia mandroso kely kokoa amin'ny alehany - miaraka amin'i Matt Cutts manome torolàlana izay mety Google Ampiasao ny fotoana fandefasana pejy ho toy ny antony iray amin'ny tranokala. Na dia mafana sy manjelanjelatra aza ity rehetra ity dia mahaliana ahy izany. Midika ve izany fa ny tranonkala manana poketra lalina ihany no ho afaka milahatra tsara amin'ny index Google?
Io ve ny fomba fanelingelenan'i Google Net Tsy Manao Politika? Sa mitady hitsitsy vola fotsiny? Alao an-tsaina angon-drakitra any amin'ny orinasa toa an'i Google rehefa afaka mandady tranokala amin'ny ampahany kely amin'ny fotoana itiavany azy ny mpikaroka azy… be dia be ny isa.
Noho izany, amin'ny maha-orinasa manankarena indrindra eran'izao tontolo izao, Google dia manomboka mandatsaka ny fambara… mafy. Ataovy haingana ny tranonkalanao dia homenay valisoa tsara kokoa ianao. Mahafinaritra izany ho an'ireo orinasa manana fotodrafitrasa, fahaiza-manao ary loharanon-karena… saingy inona no mahazo an'io zazalahy kely io? Ahoana ny fomba ifaninanan'ny bilaogy manokana manokana ao amin'ny GoDaddy amin'ny dolara vitsivitsy amin'ny orinasa iray nampiantrano amin'ny sehatra iray izay mitentina dolara an'arivony maro amin'ny fizarana entana, cache, haingam-pandeha na haitao cloud?
Raha ny fiheverako manetry tena, heveriko fa miankina amin'ny ratsy lafiny. Andao horavana ity:
Manjary sarotra kokoa ny tranonkala.
Izany dia mitaky an'i Google hampandroso ny haitao misy azy.
Mandany vola bebe kokoa amin'i Google izany.
Ny solony dia ny fanasaziana ireo tranokala mihetsika miadana, mitaky azy ireo handany bebe kokoa sy hanafainganana ny tranokalany, hampihena ny vidin'ny Google.
Tsy mahomby PR izany, na izany aza.
Fa kosa, Google dia manao azy eo ambany fiahian'i manatsara ny traikefa amin'ny tranonkala.
Tsy momba anao sy izaho io. Momba ny faran'ny Google.
Izany hoe, hafainganam-pandehan'ny tranonkala is zava-dehibe ary Manoro hevitra ny olona aho hanatsara ny fahombiazan'ny tranokalan'izy ireo hampihenana ny tahan'ny fihenam-bidy ary hampiakarana ny fiovam-po. Ny fanapahan-kevitrao dia avela ho an'ny orinasanao hanombatombanana sy hamaritana ny fiverenan'ny fampiasam-bola.
Rehefa manomboka manao an'io i Google dia tsy fanapahan-kevitry ny orinasa intsony izany - fitakiana orinasa izany ary handondona fotsiny ireo orinasa kely, na inona na inona ny maha-zava-dehibe azy, hiala amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana. Tsy mino aho fa rariny izany - ary asan'ny ampihimamba izany. Ny monopolie dia afaka mandray fanapahan-kevitra misy fiantraikany amin'ny tombom-barotra tsy misy vokany satria tsy fahampian'ny fifaninanana.
Google dia mety te hitandrina amin'ity iray ity… Bing dia toa tsara kokoa isan'andro (ary azoko atao izany Safari!).
Tags: google fitiavam-bolaGoogle +fitiavam-bola tafahoatrapage speedhafainganam-pandeha
Tazomy ny fampanantenanao
14 Nov 2009 tamin'ny 7:22 PM
Mampitombo ny vidiko amin'ny fomba maro izany:
1. Telo heny ny vidin'ny fampiantranoana ahy.
2. Mampitombo ny vidin'ny famoronana sy fikojakojana ahy amin'ny fikirakirana ny pejy mijanona
3. Mampitombo (be) ny vidin'ny fampidirana fampiasa.
Spiral up. Manankarena manankarena.
14 Nov 2009 tamin'ny 7:32 PM
Ary aza adino i Dave… aorian'ny nanaovanao izany dia afaka manoratra atiny feno banga ianao! Tsy mila miasa amin'ny fanoratana tsara intsony ianao… manahy ny haingana kokoa!
Oh eny… ary aza manahy momba ny IE, Firefox na Safari… ataovy haingana ao amin'ny Google Chrome fotsiny, sa tsy izany?
15 Nov 2009 amin'ny 4:32 maraina
Voasoratra tsara Doug. Araka ny voaporofo mazava eto, dia hanomboka hifanandrina amin'ny fampanantenan'ny 'aza manao ratsy' intsony i Google. Ho làlana mahaliana iray handrafitra azy ireo ary tsy azoko atao ny mieritreritra ny fitoviana amin'ny Yahoo! Tamin'ny taona 2001-3 satria nanomboka voaloto ny marika voalohany. Jereo izay misy azy ireo izao.
15 Nov 2009 tamin'ny 12:23 PM
Mahaliana izany. Nanomboka i Google tamin'ny filazany taminay hoe iza amin'ireo tranonkala no nifandray indrindra. Manalavitra ny fampiasana ny feon'ny vahoaka izy io fa kosa mametraka izany fitsipika izany. Manapa-kevitra ny amin'izay mety amin'ny mpanjifany izy ireo, fa tsy mamela ny mpanjifa hanapa-kevitra samirery!
16 Nov 2009 tamin'ny 5:06 PM
Halako ny fanakorontanana ahy, fa rehefa manova matetika i Google dia manjary paranoida ny tontolon'ny SE - "paranoida" amin'ny fomba CNN izay anaovan'izy ireo tendrombohitra iray molehill mba hampisondrotra ny zon'ny mpijery sy ny doka. Google dia tsy mahavita manova fanovana marina izay manara-maso ny tontolo. Matetika, ny fanovana an'i Google dia vita amin'ny borosy malalaka. Ary raha lasa anton-javatra io fanovana fampidinana io dia mety ho ao anatin'ny elanelam-potoana azon'ny ankamaroany hisoratra anarana izy. Heveriko fa na ny ankizilahy Mountain View aza dia mahatsiaro ny anjarany amin'ny tsena ary mahafantatra fa raha tsy miantso ny besinimaro izy ireo dia mety hahavery ny anjarany.
Ankoatr'izay, tsy tokony hisy olona tena mampiasa GoDaddy hampiantrano atiny (miresaka zavatra niainany). Azoko antoka fa mandratra ny traikefako ny mpampiasa azy ireo na dia tsy eo amin'ny tranokalan'izy ireo aza aho (izay antenaina hatrany).
17 Nov 2009 amin'ny 3:16 maraina
Doug = paranoida. 😐
17 Nov 2009 amin'ny 12:20 maraina
Yup ny tena Google dia manandrana mandray an-tanana ny tranonkala - ary efa elaela izay no nanaovan'izy ireo izany. Fa toy ny zava-drehetra, ny zavatra be mpampiasa dia vao mainka mitaraina ny olona momba izany.
Ny fotoana ihany no hilaza… 🙂
17 Nov 2009 amin'ny 1:12 maraina
Heveriko fa miatrika sabatra roa lela isika. Amin'ny lafiny iray, manana orinasa iray ianao izay mitondra tena… koa… orinasa iray. Ny fandaniam-bola dia hodinihina hatrany ary hataon'izy ireo izay ilaina mba hampitomboana ny fiverenany, ary amin'ity tranga ity dia ho voafitaka ireo tranonkala miadana kokoa. Etsy ankilany, Google dia manandrana manatsara ny serivisin'izy ireo, manao azy io ho mahomby kokoa ho an'ny mpampiasa ka manatsara ny traikefa amin'ny tranonkala. Rehefa miha sarotra ny tranonkala, Google dia tsy maintsy miaro ny vokariny ary mampifanaraka ny fanovana izay hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny serivisiny. Ireo mpampiasa Internet dia manome lanja ny fotoanany ary ny fanivanana ireo tranonkala izay tsy dia mandaitra dia manome lanja ny serivisy Google. Tsy hitako ho fihetsika ratsy io. Ny fanaovana haingana kokoa ny tranokala dia tsy voatery ho dingana lafo vidy, satria misy fomba maro hampiakarana ny hafainganana nefa tsy mila mamoaka vola be.
17 Nov 2009 amin'ny 1:36 maraina
Heveriko fa ity dia iray amin'ireo zavatra ratsy faran'izay ratsy hitako nataon'i Google nandritra ny fotoana ela. Izy ireo dia afaka mitaona ny tranonkala ho amin'ny tsara kokoa. Na dia tsy misy fiantraikany amin'ny filaharana be loatra aza ny lanjan'ny hafainganam-pandehan'ny pejy, ny valiny dia ho fampitomboana ny fahafantarana ny hafainganan'ny tranonkala manerana ny indostria. Tranonkala haingana kokoa dia mahasoa antsika rehetra.
Ny famolavolana tranonkala iray izay mavesatra haingana dia tsy sarotra akory. Raha jerena ny toetran'ny tranonkala ankehitriny, ny tranonkala antonony (na dia ny ankamaroan'ny zazalahy lehibe aza) dia manao zavatra diso fatratra tokoa ka misy voankazo mihantona * iray taonina *. Ampidiro ao amin'ny Firefox ny plugins YSlow sy Google PageSpeed, ary araho amin'ny manaraka ny tolo-kevitra sasany omeny anao. Na dia ny fanarahana ny vitsivitsy monja aza dia azonao atao ny manatsara ny ankamaroan'ny tranonkala amin'ny ora roa.
Averina… tsy azonao ilay resaka. 99% ny orinasa TSY manana loharanom-pahalalana hanatsarana ny tranonkalany ho an'ny hafainganam-pandeha - manandrana mitoetra ao amin'ny orinasa fotsiny izy ireo. Tsy ekeko fa zava-dehibe ny hafainganam-pandeha… Nanao ny ezaka tamin'ny tranokalako aho mba hiaraka amin'i Amazon mba hahatratrarako 2 pejy ny fe-potoana mavesatry ny pejy. Miady hevitra fotsiny aho fa safidy io ho an'ny rehetra. Io dia tsy!
17 Nov 2009 amin'ny 3:53 maraina
Doug, inona ny URL amin'ny tranokala izay namboarinao tamim-pahamendrehana niaraka tamin'i Amazon mba hahatratrarana ny fotoana lanin'ny pejy ao anatin'ny 2 segondra?
Azoko tsara ny hevitra nolazainao fa tsy mitovy hevitra aminao aho. Betsaka ny fanatsarana omen'ny YSlow azon'ny olona manana fahaizana teknika manoratra HTML fototra. Ny orinasa mivarotra an-tserasera dia tokony hanana olona afaka manitsy HTML, raha tsy izany dia manana olana lehibe kokoa noho ny tsy mitana toerana ambony ao amin'ny SERPs 🙂
YSlow dia manana antontan-taratasy an-taonina maro hanarahana anao ny fizotrany, ary misy aza ny boky toy ny "Tranonkala avo lenta" izay voasoratra tsara sy mamaky haingana izay manome anao mihoatra ny ampy hahafantarana ny fizotrany. Nandany tolakandro namaky io boky io aho herintaona lasa izay, ary tena mamporisika an'ireo izay mikasika tranokala mihitsy aza.
Heveriko fa izao rehetra lazaiko izao dia aza maika hitsara hoe inona no ho vokatr'ireo tompona tranokala raha tsy azonao ny fizotrany feno.
17 Nov 2009 tamin'ny 1:02 PM
Nifindra daholo ny ahy sary sy rakitra misy lohahevitra mankany amin'ny Amazon S3. Ny fitambaran'ny herin'izy ireo sy ny fakan'izy ireo avy amin'ny subdomain marobe dia nampihena ny fotoana laniko hatramin'ny 10 segondra + ka hatramin'ny 2 segondra ny pejy! Re: "Orinasa mivarotra an-tserasera…" - ny rehetra dia mivarotra amin'ny Internet izao Dan. Samy manana tranokala ny tsirairay… ary ny ankamaroany tsy manam-potoana na loharanon-karena hanovana ireo fanovana ireo.
16 Nov 2009 tamin'ny 9:17 PM
Tsy azoko antoka hoe zavatra ratsy ity fahitako azy ity. Amin'ny maha mpampiasa motera fikarohana ahy dia tadiaviko ny rohy rehetra izay tsindrio (na avy amin'ny motera fikarohana na na aiza na aiza) mba handefasana haingana be. Raha misy pejy roa na dia amin'ny lafiny hafa rehetra amin'ny algorithm filaharana fikarohana aza dia misy dikany amiko fa ilay iray izay mavesatra haingana kokoa dia ho ambony kokoa.
Tsy azoko daholo ny tafatafa nataon'i Cutts. Tena nilaza ve izy fa ny fotoana fandefasana pejy dia ho antony matanjaka kokoa amin'ny filaharan'ny fikarohana avy eo ny maha-zava-dehibe, ny fahefana, na ny iray amin'ireo anton-javatra hafa efa nahazatra antsika?
17 Nov 2009 amin'ny 2:52 maraina
Izy io dia singa iray fantatra fa ny fotoana mavesatry ny pejy haingana kokoa dia mitovy amin'ny tahan'ny fiovam-po tsara kokoa.
Amin'ny maha tompona tranokala anao dia tianao izany… Avy amin'ny tanjon'i Google, fizarana algorithm io, satria ny pejy mampakatra haingana dia manome traikefa tsara kokoa.
Doug, efa niasa ho SAAS ianao taloha… raha misy zavatra miadana dia matetika no omena tsiny amin'ny fampiharana fa tsy ireo antony miankina amin'izany. Tena mahasosotra tokoa ny zavatra niainanao rehefa tsy maintsy miandry 10 segondra ianao vao halefa ny atiny aorian'ny fitadiavana… Heveriko fa sarobidy amin'ny pejin'ny pejy ny manampy an'io amin'ny equation fa tsy "ratsy" toa ny filazan'ny rehetra. Ny pejin'i Google dia feno haitao sy fantsom-pifandraisana - saingy haingana dia haingana izany ary tian'izy ireo ny olona hanangana pejy sy fampiharana toa izany…
17 Nov 2009 amin'ny 3:14 maraina
Tsy misy tsy fifanarahana momba ny hafainganana noho ny antony iray, Dale. Tsy miombon-kevitra tsotra fotsiny aho fa ny motera fikarohana dia tokony hiahy ny hafainganan'ny hafainganana. Ary tsy ny pejy sy ny fampiharana Google rehetra dia haingana. Tsy maintsy nanoratra ny ankamaroan'ny parser an'ny Google Map API an'ny Google Map aho mba hahatonga azy io hiasa mihoatra ny rakitsoratra am-polony. Hametraka ny olona mampiasa ny Google Maps ve izy ireo raha Yahoo! Manana fe-potoana haingana kokoa ny sarintany? Izaho tsy mieritreritra!
17 Nov 2009 tamin'ny 3:12 PM
Miombon-kevitra amin'i Christophe aho. Raha ny tena izy, Google dia ampiasain'ny olona an-tapitrisany manerantany, ka eny tsy lavorary izy io, saingy nahavita zavatra lehibe hatreto. Google mila vola? Iza no tsy manao azy anio; Satria izy ireo dia iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra eran'izao tontolo izao dia midika hoe afaka izy ireo, tsy fantatro, ho tsara fanahy izy ireo ary tsy ho tia vola? Taonjato faha-21!
Dec 1, 2009 amin'ny 1: 21 AM
Fa maninona no tsy maintsy misy ny pejy web an'ny orinasa kely? Ny ankamaroan'ny orinasa madinidinika dia hanana tranokala tsotra, izay tsy tokony ho ela akory vao entina. Etsy ankilany, ny monoliths toa ny Microsoft dia manana tranokala goavambe misy antontam-bilaogy, izay noho izany dia maharitra ela kokoa noho ny tranokalan'ny orinasa kely misy anao. Noho izany ny orinasa lehibe iray dia hanana fatiantoka rehefa mampihena ny fotoana lanin'ny pejy.
Heveriko fa tsy misy antony lehibe tokony hampiasan'ny Google ny fotoana pejy ho laharam-pahamehana, saingy azo antoka fa tsy dia ratsy loatra izany. Ary na dia izany aza, dia hisy fiantraikany amin'ny orinasa lehibe ihany izany.